Liquid Oxygen sịlịnda
Bottle Liquid nke Liquid
Mkpụrụ Carbon dioxide Bottle
Liquid Argon sịlịnda
Tank Cryogenic Nchekwa
Osimiri Nchekwa Vetikal
Dewar kalama ngwa
Ọla kọpa Pipe na njikọ Of Pressure Regulating valvụ
Wayzọ Nkwonkwo Anọ
Liquid Ọkwa Display njikọ
Ugbo elu Uzo Ozo
Digital Liquid Ọkwa Mita
Gas Ọrụ valvụ
Inlet Ma tinyekwa Liquid valvụ
Ikuku Iyuzucha Valve
Nkọwa maka cryogenic ịgbado ọkụ nke gwara mmanụ gas
Ọdịdị nke ite Dewar
Akụkụ ime na mpụta nke Dewar bụ nke igwe anaghị agba nchara, a na-eji igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ sistemụ na-akwado ya, iji meziwanye ike ma belata nfucha ọkụ. Enwere akwa mkpuchi mkpuchi dị n'etiti tank dị n'ime na mpụta mpụta. Multi-oyi akwa kwes mkpuchi ihe na akwa agụụ hụ na mmiri mmiri nchekwa oge.
A na-edozi vaporizer n'ime shei iji gbanwee mmiri mmiri cryogenic n'ime gas, na supercharger wuru n'ime ya nwere ike ime ka nrụgide ahụ gaa na nrụgide a kara aka ma mee ka ọ kwụsie ike n'oge eji ya, na-emezu nzube nke ngwa ngwa ma kwụsie ike. Onye ọ bụla gas cylinder a gwara mmanụ nwere igwe anaghị agba nchara mgbanaka (nchedo mgbanaka) iji chebe pipeline. Ejikọtara mgbanaka nchebe na cylinder ya na ihe nkwado anọ, a na-etinye ihe nkedo ọ bụla iji kwado trolleys na cranes iji buru cylinder gas.
A na-etinye akụkụ niile na-arụ ọrụ n'elu gas cylinder maka ọrụ dị mfe. N'ebe a na-eji onwe ya eme ihe, onye ọrụ nwere ike ijikwa usoro ojiji site na valvụ na-agbapụta, valvụ booster, nlele nrụgide, valve valve, wdg.
Iji hụ na eriri dị n'ime gas cylinder dị n'okpuru nrụgide nchekwa, a na-etinye valvụ nchekwa na diski rupture na gas cylinder.
Ojiji na njirimara nke Dewar flasks
A na-eji ya ibufe ma chekwaa mmiri cryogenic dị ka mmiri oxygen, mmiri mmiri nitrogen, mmiri mmiri argon, mmiri mmiri carbon dioxide, LNG, wdg gas cylinder nwere ike iji nye mmiri ma ọ bụ gas gas.
Igwe gas dị mfe iji, dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi, akụ na ụba na inogide. Ihe akọwapụtara dị ka ndị a
1. A na-eme ka usoro nkwado nke tank dị n'ime igwe anaghị agba nchara iji mezuo nzube nke obere ọkụ ọkụ na ike dị elu.
2. Ọ dị mfe iji ma otu onye nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ n'adabereghị na ya.
3. Chekwaa mmiri mmiri cryogenic dị ọcha. Nnukwu ikike nchekwa. Ike nchekwa gas nke DP175 dewar cylinder kwekọrọ na ihe karịrị 18 ugboro ikike nchekwa gas nke ọkọlọtọ gas dị elu.
4. Nrụgide dị n'ime nke gas cylinder ga-ebili n'oge nkwụsị mgbe emejuchara ya. Gas cylinder nwere usoro mkpuchi mkpuchi dị elu, na nrụgide ịrị elu ya dị ala. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ dịghị mkpa iji belata nrụgide site na valvụ nchekwa.
5. Onye na-enye ọkụ na vaporizer nwere ike ịghọta gas na-aga n'ihu ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ dịghịkwa mkpa ịwụnye vaporizer n'èzí n'okpuru usoro ọgwụgwọ.
Ịgbado ọkụ ụlọ ọrụ
Industrylọ ọrụ ọgwụ
Ulo oru ahia
Aseslọ ọrụ subpackage gas
Mara: Mgbe ị na-ejupụta gas nkịtị, jiri valvụ nchekwa abụọ ma kpochapụ diski mgbawa n'ime tank dị n'ime.
Kpachara anya: Gbanwezi ihe nrịgo elu nke valvụ a na-achịkwa na-achịkwa valvụ agaghị enwe mmetụta nke ịgbalite ọsọ nrụgide. Adgbanwezi ihe nrịgo elu nke nkedo na-achịkwa valvụ na uche ga-eme ka usoro nrụgide jikọtara. Ihe mebiri emebi.
Mkpokọta nrụgide na-achịkwa valvụ: Nke a valvụ nwere sọrọ ọrụ nke mgbali ụkpụrụ na ikuku ịzọpụta. Mgbe ị na-akwagide, mmiri mmiri cryogenic dị na karama ahụ gbanwere n'ime uzuoku zuru oke site na eriri na-agba ume, wee laghachi na oghere gas n'oge elu nke cylinder site na valvụ a, si otú a na-enye nrụgide na-aga n'ihu ma na-adịgide adịgide na cylinder. Mgbe ị na-eji gas, gas nke nwere nnukwu nrụgide na oghere gas dị n'elu nke gas cylinder ka a na-ahọrọ ka ọpụpụ ya n'èzí site na valvụ a iji zere ikuku gas nke mmeghe nke valvụ nchekwa kpatara n'ihi oke nrụgide gas. Okwu anyanwụ na-akpaghị aka na-enweghị ọrụ aka.
Gas eji valvụ: Ejikọtara valvụ a na vaporizer na-arụ ọrụ, nke nwere ike ịnweta gas na-ekpo ọkụ. Ọ chọrọ njikọta CGA nke dabara na gas nke akpa ahụ.
Ntinye uzo na ntaneti: A na-eji valvụ a eme ihe iji jikwaa ndochi na ịchụpụ mmiri mmiri cryogenic. Onye ọrụ nwere ike jikọọ na ọkpọkọ ọkpọkọ CGA n'ihu valvụ ahụ site na sooks pụrụ iche, Mee mmeju na nhapu nke gas cylinders.
Boosting valvụ: Nke a valvụ na-achịkwa wuru na-booster circuit. Mepee valvụ a ka ị pịa karama ahụ.
Valvụ valvụ: A na-ejikọ valvụ a na oghere gas nke gas cylinder. Imepe valvụ a nwere ike ịhapụ gas na cylinder ma belata nrụgide ahụ.
Pressure nlele: Na-egosiputa nrụgide nke gas cylinder, otu ahụ bụ pound kwa square inch (psi) ma ọ bụ megapascals (MPa).
Ọkwa nlele: The cylinder larịị nlele na-ese n'elu mmiri mmiri ụdị larịị nlele, nke na-eji buoyancy nke cryogenic mmiri na mkpokọta na-egosi cryogenic mmiri mmiri na sịlịnda ikike. Ma a ghaghị tụọ ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi.
Ngwaọrụ nchekwa: A haziri eriri eriri ahụ na valvụ nchekwa nke mbụ na diski rupture nke abụọ iji chebe cylinder mgbe ọ na-emebiga ihe ókè. (N'ihe banyere nrụgide) a meghere valvụ nchekwa ahụ, ọrụ ya bụ ịhapụ nrịgo nrụgide nke ụfụ ọkụ ọkụ na-efu nke mkpuchi mkpuchi na nkwado, ma ọ bụ nrụgide ịrị elu nke ọkụ ọkụ na-agba ọsọ mgbe agụụ nke Sanwichi oyi akwa agbajiri ma n'okpuru ọnọdụ ọkụ. Mgbe valvụ nchekwa ahụ dara, diski na-agbawa agbawa ga-emepe iji hapụ nrụgide iji hụ nchekwa nke gas cylinder.
Mara: Mgbe ị na-ejupụta gas nkịtị, jiri valvụ nchekwa abụọ ma kpochapụ diski mgbawa n'ime tank dị n'ime. A na-enweta nchebe nke ogige ahụ n'okpuru ọnọdụ nrụgide site na oghere agụụ. Ọ bụrụ na tankị dị n'ime ahụ (na-ebute nrụgide dị elu nke ukwuu), ihe nkwụnye agụụ ga-emeghe iji hapụ nrụgide ahụ. Ọ bụrụ na nkwụnye agụụ na-ehi mmiri, ọ ga-eduga na mbibi nke ihe na-eme ka agụụ ghara ịmịpụ. N'oge a, "ọsụsọ" na ntu oyi nke shei nwere ike ịchọta. N'ezie, ntu oyi ma ọ bụ odide na njedebe nke ọkpọkọ jikọtara na karama ahụ bụ ihe nkịtị.
Dọ aka na ntị: Ọ machibidoro iwu iji dọpụta oghere agụụ n'ọnọdụ ọ bụla.
Mara: Rupture discs nwere ike iji otu ugboro. A ga-anọchi diski rupture mgbe ọ rụchara ọrụ. Enwere ike ịzụta n'aka ụlọ ọrụ anyị.
Nke gara aga: Bottle Liquid nke Liquid
Osote: Ebube Lng
Mmiri Liquid Oxygen Maka Ere
Adress: Mba 1, Zhenggang Road, Matun Industrial Park, Raoyang County, Hengshui City, Province Hebei, China.